Spiro: Ka-Qayb-galka Waxqabadka ee Isticmaalka AI | Martech Zone
Spiro: Ka-Qaybgalka Wax-Ku-oolka ee Isticmaalka AI
Talaado, Agoosto 25, 2020 Arbacada, Agoosto 26, 2020 Douglas Karr
Spiro wuxuu adeegsadaa sirdoonka macmalka ah si aad u siiso hogaamiyaashaada iibka aragtiyo ficil leh iyo wakiilada iibkaaga talooyin wax ku ool ah tallaabooyinka xiga ee ugu fiican si looga caawiyo kahortaga fursadaha lumay iyo kordhinta wax soo saarka iibka.
Macaamiisha Spiro waxay soo sheegaan natiijooyin la yaab leh, oo ay ku jiraan:
Awoodda ururinta 16 jeer xog dheeri ah
Awoodda adiga ama kooxdaada iibka inaad gaadho 30% rajo badan isla waqtigaas.
Awooddaada xiro 20% iibka badan heshiisyo
Faa'iidooyinka Spiro Ku dar
Spiro waxay soo bandhigaysaa qaab cusub oo otomaatiga iibka ah: maaraynta xiriirka firfircoon.
Hawlaha kooxda diirada saar - Kaaliyaha Spiro wuxuu siiyaa dadka isticmaala liisaska maalinlaha ah ee la sameeyo ee ah AI iyo shaqooyinka adeegsadayaasha soo saaraya ee kordhiya wax soo saarka.
Kordhi wax soo saarka kooxda - Wicitaanada la dhisay VoIP iyo liistada wicitaanada AI-soo saaray waxay u oggolaaneysaa kooxaha inay gaaraan rajo badan, iyo qoritaanka wicitaanka otomaatigga ah wuxuu kordhiyaa waxtarka kooxda
Hubso hawlgal firfircoon - Spiro waxay bixisaa xasuusin dabogal ah oo dabagal ah oo ku saleysan wada hadalka si loo hubiyo in heshiis uusan ka dhex bixin dillaacyada.
Dardar galinta heshiiska - Spiro wuxuu falanqeeyaa dhibcaha kaqeybgalka wuxuuna diiradda saaraa reps-ka fursadaha ay u badan tahay inuu xirmayo.
Kordhi qiimaha-ku-guuleysiga - Spiro waxay bixisaa aragti dhuumaha oo dhameystiran iyo aragtiyo ficil ah si looga caawiyo kahortaga heshiisyada lumay.
Saadaalinta Iibka - Spiro waxay siisaa aragti buuxda dhuumahaaga waxayna u xilsaartaa dhibcaha kaqeybgalka heshiis si loo wanaajiyo saxsanaanta.
Spiro ma beddeleyso qalab otomaatig ah oo suuqgeyn ah (taas bedelkeeda, waxay la midoobaan aaladahaas), laakiin waxaad u diri kartaa emayllo ku habboon liisaska bartilmaameedka ah ee 500 ee lala xiriirayo, iyada oo awood u leh inaad jadwal u sameyso waqti iyo taariikh mustaqbalka.
Jadwal Spiro Demo
Mahad gaar ah Sheryl at Golaha wasiiradaM raadinta!
Tags: aigolaha wasiiradakordhin heshiisyadakordhin iibintaiibinta dibaddaka qayb qaadashada iibkaKordhinta Iibkahawlgelinta iibkawaxqabadka kooxda iibkawax soo saarka kooxda iibkaspirovoip
5 Tilmaamood Oo Ku Saabsan La Macaamilista Warbaahinta Sida Ilo Khabiir Ah